Kakade sekuyinto yakudala yabagibeli, ibhayisikili eligoqiwe lisemusha endaweni yokuhamba ngebhayisikili. Kepha akuzona ezabagibeli kuphela abafuna ukukwazi ukugibela ibhasi noma isitimela ngebhayisikili labo, kanye nokuligcina ngaphansi kwedeski labo emsebenzini. Zingaba futhi ukukhetha okuhle kunoma ngubani onemikhawulo ...
Ungalikhetha Kanjani Ibhayisikili
Ufuna okugibele okusha? Kwesinye isikhathi i-jargon ingesabisa kancane. Izindaba ezimnandi ukuthi akudingeki ukuthi ukhulume kahle ngebhayisikili ukuze unqume ukuthi yiliphi ibhayisikili elilungele uhambo lwakho olunamasondo amabili. Inqubo yokuthenga ibhayisikili ingabiliswa iye ezinyathelweni ezinhlanu eziyisisekelo: -Khetha uhlobo lwebhayisikili elilungile ...
Isesha izindaba zakamuva mayelana nomkhakha wamabhayisikili, kunezihloko ezimbili ezingenakugwenywa: esisodwa ukuthengisa okushisayo. Ngokuya ngemininingwane evela eChina Bicycle Association, kusukela kwikota yokuqala yalo nyaka, inani lezimboni elengeze inani lebhayisikili lezwe lami (kufaka ibhayisikili likagesi ...
Izinzuzo zokuhamba ngebhayisikili cishe azipheli njengoba imizila yezwe ongahle uyihlole kungekudala. Uma ucabanga ukuthatha ibhayisikili, futhi ulinganise uma kuqhathaniswa neminye imisebenzi engahle ibe khona, khona-ke silapha ukuzokutshela ukuthi ukuhamba ngebhayisikili kuyindlela engcono kakhulu. 1.Ukujikeleza kuthuthukisa iM ...
Imboni Yamabhayisikili eChina
Emuva ngawo-1970, ukuba nebhayisikili elifana ne- “Flying Pigeon” noma i- “Phoenix” (amamodeli amabhayisikili amabili ayethandwa kakhulu ngaleso sikhathi) kwakuyisimo esifanayo sesimo senhlalo esiphakeme nokuziqhenya. Kodwa-ke, ngemuva kokukhula okusheshayo kweChina eminyakeni edlule, inkokhelo inyukile kumaShayina anamandla amakhulu okuthenga ...
Ezokuvakasha Kwebhayisikili EChina
Noma ukuvakasha ngebhayisikili kuthandwa kakhulu emazweni amaningi aseYurophu ngokwesibonelo, uyazi ukuthi iChina ingelinye lamazwe amakhulu emhlabeni, ngakho-ke kusho ukuthi amabanga amade kunalapha. Kodwa-ke, ngokulandela ubhadane lweCovid-19, abantu abaningi baseChina abangakwazanga ukuhamba ...